Novotel Yangon Max - SUN, SWIM, SURF @ Novotel Yangon Max
Novotel Yangon Max - Family & Business trip hotel - SUN, SWIM, SURF @ Novotel Yangon Max
Home> အထူးအစီအစဉ်များ>SUN, SWIM, SURF @ Novotel Yangon Max
swim, surf internet, relax
Last chance to pack your bags for the month before the Rain. Relax, suntan, and enjoy the cool breeze from our swimming pool. Have breakfast the next morning and start all over again. Don’t miss the chance to enjoy your staycation. Limited rooms, BOOK Now! Valid for the month of May only.
For your reservation please call 01-2305878
မိုးရာသီမရောက်ခင်လေး နေရောင်အောက်မှာနေပူစာလှုံ၊ ရေကူးရင်း တိုက်ခတ်လာတဲ့လေကိုရှုရိူက်ကာ ဘဝအမောတွေခဏဖြေဖျောက်ဖို့နောက်ဆုံး အခွင့်အရေးနော်။ နောက်ရက်မှာလဲ မနက်စာကိုပြည့်ပြည့်ဝဝစားပြီး ဆက်လက်အနားယူလို့ရသေးတယ်ဆိုတော့ ဘာလိုအုံးမှာလဲ။
မေလအတွက်သီးသန့် Deluxe အခန်းတစ်ခန်းကို မနက်စာ ၂ယောက်အပါအဝင် တညအိပ်အတွက် ၉၉,၀၀၀ ကျပ်ပဲကျသင့်မှာပါ။ အခန်းအရေအတွက် ကန့်သတ်ထားလို့ အခုပဲအမြန် ၀၁ ၂၃၀၅၈၅၈ သို့ဆက်သွယ်ဘိုကင်တင်လိုက်ပါ။